Qaama miidhamummaan sadarkaa gaarirra akkan gahu na taasise: Injifattuu badhaasa Noobeelii Looreet Yetnabbarsh Nigusee - BBC News Afaan Oromoo
''Adduunyaa kanatti kanin dhufe rakkoo hiikuuf malee rakkoo uumuuf miti''
Osoon qaama miidhamtuu ta'uu baadhee badhaasa idil addunyaa kana fudhachuu mitii barnoota kutaa tokkoffaayyu hin baradhu ture kan jettu Yetnabbarsh Nigusee, namoota muraasa badhaasa 'The right Livelihood award' jedhamu fudhatan keessaa tokko taateetti.
"Qaroo dhabeettii ta'uu kootiin wanti anaaf ta'u qe'een itti dhaladhee, waggoota muraasaaf keessa jiraadhe keessa waan hin jirreef haati koo aarsaa guddaa kafaltee gara magaalaatti na fidde" jetti taatee jireenyashee hin dagatamne duubatti deebitee yeroo yaadattu.
Yetnabbarsh Nigusee ga'eettii waggaa 35 kan qaama miidhamummaanshee umurii ijoolummaashetti manaa baasee kiloomeetiroota 800 ol ishee imalchiise dha.
Dhukkubni ijaa ganamumaan ishee mudate wal'aansaan fayyuu dide, kanaafis mana barnootaa qaroo-dhabeeyyii kaatolikii magaala Shaashamaneetti argamutti baruumsa akka eegaltu taasifame.
Qaama miidhamummaan ijaa kun dubartiin tun gaa'ela umurii malee hawaasa ishee keessatti baramaa ture jalaa akka miliqxu ishee taasise.
"Qaroo-dhabeettii ta'uun koo jireenya kallattii biraan akkan ilaaluu fi jiraadhu na taasise" jechuun dubbatti.
Hawaasa fi Seera
Goodayyaa suuraa Yetnabbarsh Nigusee badhaasa noobeelii 'The right Livelihood award' jedhamu injifatte
Itoophiyaan biyya lammiileen ishee dhibbeentaa 17.5 yookin namootni miliyoona 15 qaama miidhamummaa waliin jiraatan ta'uu ragaan Dhaabbata Hojjettoota Addunyaa (ILO) ni agarsiisa.
Kunis kan addunyaa dhibbeentaa 15 waliin yeroo madaalamu dhibbeentaa 2.5'niin kan caalu dha.
Hanqinni hubannoo hawaasaa, kabajamuu dhabuu mirgoota qaama miidhamtootaa, qaama miidhamtoota giddugaleessa godhachuu dhiisuu misoomaawwan bu'uraa fi kanneen biroon immoo dhimmoota jireenya qaama miidhamtoota biyyattii hammeessani dha.
"Ammas taanaan jechootni kabaja qaama miidhamtootaa xiqqeessan fi sirreeffamuu qaban sanadoota seeraa biyyattii keessa jiru" kan jettu Yetnabbarsh, seera hariiroo hawaasaa keewwata 339 fi 340 akka fakkeenyaatti kaasti.
Gama hawaasaatiinis yeroodhaa gara yerootti wantootni foyya'an jiraatanillee rakkooleen ilaalchaa fi hanqinni hubannoo jiru salphaa akka hin taane dubbatti.
"Qaama miidhamummaan akka na qorettin jiraadha"
Itoophiyaa keessatti dubartii ta'uun mataasaatiin qormaata guddaa qaba.
Biyya mirgi wal-qixxummaa dubartootaaf dhiirotaa haalaan hin hubatamne fi hin babal'anne keessatti dubartii qaama miidhamtuu ta'uun ammo baay'ee ulfaataa ta'uusaa himti.
"Ilaalchi kun fooyya'aa jiraachuusaa haaluu baadhullee hawaasa keenya keessatti dubartoonni akka eeggatootaatti ilaalamu. Qaama miidhamtuu yeroo taatu immoo akka nama deeggarsa barbaaduutti ilaalamta. Kun lamaan walitti yoo ida'aman daandii milkaa'inaa deemtu baay'ee fageessu," Jetti.
"Dubartii taatee barnoota yeroo barattu hawaasa mirga walqixxummaa dubartootaaf dhiirootaatti amanu keessallee yoo jiraatte qaama miidhamummaan kee qormaata sitti ta'a."
Milkaa'ina ishee har'aa keessatti qooda guddaa kan qaban, haadha fi akkoo ishee kan leellistu Yetnabbarsh, dubartii ta'uu caalaa qaama miidhamummaan akka ishee qoraa jiru himti.
"Qananiisaa fi Haayileen yeroo mo'atan hidhii hin xuuxnu, haa ta'u malee qaama miidhamaa yookan miidhamtuun tokko yeroo milkooftu hidhiitu xuuxamaaf."
"Namni sun qaroo-dhabeessa ta'uusaan alatti dandeettii hedduu qabaachuu waan danda'uuf, yeroo isa agarru mararfachuu osoo baannee gaarii dha" jetti injifattuun badhaasa Noobeelii Looret Yetnabbarsh Nigusee.
Hanqina Hubannoo: Sababa barame
Daa'imman waliin taphatanii guddatan boru waliin hojjechuun, waliin gaa'ela dhaabuu fi waliin biyya jijjiiruun itti hin ulfaatu amantaa jedhu qabdi.
Daa'imman qaama miidhamtoota carraa barnootaa hin arganne ni barsiifti. Manni barumsaa wanta fooyya'e uumuuf malee wanta duraan ture irra deebi'uuf dhaabbachuu hin qabus jetti.
Goodayyaa suuraa Manni baruumsaa bakka wanti fooyya'e itti uumamu ta'uu qaba
Daa'imman qaama miidhamtoota daa'imman biro waliin makanii barsiisuun ilaalcha hawaasaa jijjiiruu fi loogii qaama miidhamtootarra gahu xiqqeessuuf akka fayyadu dubbatti.
Yeroo baay'ee rakkoolee hawaasummaa al tokkos ta'ee irra deddeebiin mul'ataniif hanqinni hubannoo akka sababaatti ka'a. Loogii fi ilaalcha dogongoraa namootni baay'een qaama miidhamtoota irratti qabaniifis hanqinni hubannoo sababa bay'inaan himamu dha.
"Rakkoon mirga qaama miidhamtootaa furamuu hin danda'u" kan jettu leellistuun mirga dubartootaaf qaama miidhamtootaa tun yeroo kamiyyuu mirgi wal qixxummaa namootaa akka hin tuqamneef daangaa kaa'uun fala akka ta'e himti.
Kana malees barnootni, seerri fi miidiyaaleen, mirga qaama miidhamtootaa eegsisuu fi walqixxummaa isaanii mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka qaban dubbatti.